Clion: Muchinjikwa-Ipuratifomu Yakabatana Yakasimudzira Nharaunda yeC uye C ++ | Linux Vakapindwa muropa
Clion: Muchinjikwa-Ipuratifomu Yakabatana Yakasimudzira Nharaunda yeC uye C ++
Nhasi ngatitaure nezvenharaunda yakabatanidzwa yekusimudzira (IDE) izvo inouya kubva muruoko rweJetBrains kambani inovandudza software inonyatso kuzivikanwa nekugadzira maturusi akasiyana uye mutauro weKotlin.
Iko kunyorera kwatichataura nezvazvo ndeye CLion zvinova IDE yakanangana nekusimudzira muC uye C ++ programming mitauro, CLion muchinjikwa-chikuva IDE saka inogona kushandiswa paLinux, macOS uye Windows inosanganiswa neCMake kuvaka system.
CMake imhuri yezvishandiso zvakagadzirirwa kugadzira, kuyedza uye kurongedza, sezvo ichidzora uyel software yekuunganidza maitiro uchishandisa mapuratifomu akapusa uye compiler yakazvimiririra yekumisikidza mafaira.
Kuburitswa kwekutanga kunoenderana neGNU Compiler Unganidzo (GCC) uye Clang uye GDB Debugger, LLDB uye Google Test compiler. Pamusoro peC neC ++, CLion inotsigira mimwe mitauro zvakananga kana kuburikidza nemapulagi: Kotlin, Python, Rust, Swift, nevamwe.
1 Nezve CLion
2 Maitiro ekuisa CLion paLinux?
CLion senge maIDE mazhinji ine basa rekupedzisa kodhi zviri nyore, iyo iyo CLion inogona kukubatsira iwe kuchengetedza yakawanda nguva mukuzadzisa syntax yekodhi yako iwe yauri kunyora mairi.
Uye kwete izvo chete CLion zvakare ine pre-yakarongedzwa kodhi syntax matemplate iyo yaunoratidza nayo syntax uye ichagadzira iyo kodhi inoratidza iwe zvakare inogoneka syntax uye nokudaro nekuvandudza kumhanya kwekumhanya.
Imwe pfungwa yatinogona kuratidza nezvechirongwa ichi ndechekuti zvakare ine injini ine simba yekutsvaga, sezvo isingaite chete kutsvaga kweiyo nzira yaunoratidza mukati mefaira rauri kushanda pariri, asi rinozviita mukati mevaya vese vawakavhura panguva iyoyo.
Pakati pehunhu hwayo hukuru hwatinogona kuratidza:
Smart kodhi mupepeti
Kodhi yekutsvaga uye kufamba
Kodhi yekugadzira uye kugadzirisa
Valgrind Memcheck kusangana
Vim kutevedzera maitiro
Si unoda kuisa chirongwa ichi mune yako system Ndinofanira kukuudza kuti haina mahara saka unofanirwa kubhadhara rezinesi rekushandisa kungave pamwedzi kana pagore.
Kunyange zvakadaro kana iwe uri mudzidzi kana mudzidzisi iwe unogona kuwana yemahara yegore-rezinesi Nezve CLion uye nezvimwe zvekushandisa zvakagadzirwa neJetBrains, iwe unongofanirwa kupa yako email email kana kutumira chako chinyorwa.
JetBrains inokutumira email yekusimbisa uye chinongedzo kwaunogona kumisikidza rezinesi rako iyo iwe yaunogona kushandisa ku CLion, AppCode, DataGrip, dotCover, dotMemory, dotTrace, GoLand, IntelliJ IDEA Pakupedzisira, PhpStorm, PyCharm, ReSharper, ReSharper C ++, Rider, RubyMine, uye WebStorm.
Maitiro ekuisa CLion paLinux?
Zvino kune rimwe divi iwe unogona zvakare kuwana yemahara-mazuva makumi matatu kuyedzwa, nekuda kweizvi iwe unofanirwa kurodha kunyorera kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti yeiyo purojekiti uye muchikamu chayo chekurodha unogona kuwana iko kunyorera, izvi zvinogona kuitwa kubva chinotevera chinongedzo.
Kana izvi zvaitwa, tinosunungura iyo faira ichangowanikwa ne:
Isu tinopinda dhairekitori iro rakagadzirwa kana uchiburitsa zip mufaira, ingo dzosa "1.5-1" neshanduro yawakadhirodha.
Uye isu tinoita iyi yekumisikidza kuisa kunyorera pane yedu system:
Uye takagadzirira nayo, tichave tatova neCION yakaiswa pakombuta yedu.
Iye zvino mune iyo Arch Linux isu tinogona kuisa iyo application kubva kuAUR saka tinofanira kuva yekuisa wizard yeAUR.
Zvekuisirwa kwayo isu tinofanirwa chete kunyora:
Uye voila, iwe watove neClion yakaiswa pane yako system.
Finalmente Imwe nzira yekuisa iyi application pane yedu system ndeye kuburikidza neiyo Snap package, saka zvinodikanwa kuti isu tive nerutsigiro rweiyi tekinoroji mune yedu system.
Zvekuisirwa kwayo isu tinongofanirwa kuvhura terminal uye nekuita unotevera kuraira mairi:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Clion: Muchinjikwa-Ipuratifomu Yakabatana Yakasimudzira Nharaunda yeC uye C ++
Maitiro ekuti titambe mitambo ye PlayStation pakombuta yedu neGnu / Linux
CentOS Linux 6.10 iri pano neRetpoline-based mitigations yeSpecter V2